COVID-19 IYO SOMALILAND: Maxaa Xiga Xaaladan? | Salaan Media
May 20, 2020 | Published by: Hamse
Covid-19 waa cudur ilaa hadda (11.05.2020) saamayn wayn ku haya dhamman aduunyada kaas oo mudo kooban haleelay dad kor u-dhaafaya afar milyan oo qof sida oo kalana galaafatay nolasha dad gaadhaya laba boqol iyo sideetan kun oo qof (War-bixinta Maalin laha ee WHO). Sidoo kale caabuqan Karona waxa uu keenay hoos-udhacii dhaqaale ee ugu waynaa aduunyada mudo kudhow qarni (Dalada Dhaqaalaha Aduunka,2020). Waxa intaas dheer, in cudurkan uu si fudud ufaafo sidaas oo ay tahay ilaa hadda daawo saxa looma hayo waxa kaliya ee lagaga hortigi karaa waa ilaalinta faya-dhowrka iyo kala fogaanshaha bulshada.(WHO)
Wadanka Shiinaha ayaa ah wadankii uu caabuqa Karona ka bilaabmay dhammaadkii sanadkii 2019. Waxa uu dilay dad aad ubadan waxa kale oo uu keenay hoos-udhac wayn oo ku yimid dhaqaalihii shiinaha ee xowliga ku socday sanadadii ugu danbeeyey laakin saamaynta cudurkan ayaa umuuqata mid kooban marka loo eego wadamada kale ee aduunka gaarahaa wadamada Yurub iyo Markaykanka (Ururka Caafimadka Aduunka, 2020 ).
Wadamada Yurub iyo Maraykan ka oo ah wadamada ugu fiican aduunka dhinaca dhaqaalaha, waxbarashada iyo caafimaadka ayaa noqday ubucda cudurkan Covid-19 haskaas oo uu keenay masiibo biniaadam tii ugu xumayd wixii kadanbeeyey dagaalkii labaad ee aduunka. Wadanka Maraykanka kaliya, cudurkan Covid-19 waxa uu soo ritay dad gaadhaya hal milyan iyo sadex boqol oo qof waxana uu dilay sideetan kun oo qof . Wadamada Ingriiska, Talyaaniga, Spain iyo Faransiiska ayaa ah afarta wadan ee safka hore kaga jira wadamada Yurub ee xanuunkani sida ba’an usaameeyey (Ururka Caafimadka Aduunka, 2020 ).
Wadamada Africa ayaa ah qaar looga baqo-qabo in cudurkani uu si-fudud ugu faafo kana gaysto saamayn aad ubalaadhan. Kiisas cusub oo cudurkan Covid-19 ayaa laga diwaan galiyey dhamman wadamada qaarada Africa iyada oo ay jirto agabka iyo adeega caafimaadka oo aad u-liita iyo diyaar-garowga caabuqa karona oo aad uhooseeya (Ururka Caafimadka Aduunka, 2020 )
Somaliland waxa ay kamid tahay wadamada aad ka ugu nugul in cudurkan Covid-19 in uu si fudud ugu fido kana gaysto saamayn wayn oo ku habsata bulsho markoodii hore la daalaadhacaysay dhibaatooyin aad utiro badan.
Iyada oo aan wali la samayn baadhitaan caafimaad oo balaadhan, haddana waxa la xaqiijiyey sideed iyo afartan qof oo uu haleelay caabuqa Karona waxana udhintay shan qof. Waxaana muuqata in cudurkani uu si baahsan ugu jiro bulshada dhexdeeda. (Wasarada Cafimadka Somaliland)
Iyada oo ay gudida u-xilsaaran ka hortaga iyo la-dagaalanka cudurkani ay qaadeen talaabooyin dhowra, haddana howl-qabadka gudidan ayaa umuuqda mid aad ugaabisa taas ay tabayaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Haddii howshu sidan kusii socoto, cudurkani Covid-19 si balaadhan ayuu ugu ufadi doonaa bulshada dhexdeeda taasina ay keeni karto dhibaatooyin ay adkaan doonto sida loo maareeyo loogana soo kabto mustaqbalka.
Talaabooyinkii Ugu Horeeyey ee Dowlada Somaliland Ka Qaadatay Cudurka Covid-19
Dowladu waxa ay qaaday talaaboyin wax-ku-oola kuwaas oo laqaaday wakhti munaasaba laakin markii danbe ay adkaatay dar-dar galinta kahortagista iyo la dagaalanka cudurka Covid-19. Waxa kamid ahaa kuwan hoos ku xusan:
Madaxwaynaha Somaliland, Mudane Muse Bixi, waxa uu magacaabay gudida kahortaga iyo la-dagaalanka xanuunka Covid-19 kuwaas oo uu gadhwadeen ka yahay madaxwayne-ku-xigeenka, Mudane Abdirahman Saylici, waxana kujira dad aqoon iyo waayo-aragnimo badan leh.
Gudidu waxa ay kulamo kala duwan la yeesheen qaybaha bulshada ee ay khusayso xaalada xanuunkan sida culimada, ganacsatada iyo qaybaha qaldoorka ee bulshada.
Gudida waxa ay soo saareen amaro looga hortagayo xanuunkan sida in la xidho dhamman goobaha waxbarashada, joojinta qaadka iyo wacyi-galinta bulshada.
Gudidu waxa ay sameeyeen gudiyo heer gobol ah kuwaas oo ka shaqaynaya kana soo war-bixinaya xaaladaha xanuunkan iyo ka hortagiisa ee heer gobol iyo mid dagmo.
Gudidu waxa ay isku howleen helista goobo lagu daryeelo bukaanka uu xanuunkani soo rito iyo helista qalabkii caafimaad ee lagala hortagi lahaa xanuunkan Covid-19.
Xaaladaha Sahlaya Faafida Xanuunkan ee gudaha Somaliland
Is-dhexgalka iyo Wada-jooga bulshada oo aad sareeya
Bulshada Somaliland oo ha bulsho jecel warka iyo wada-jooga ayaa keentay in kumanaan ka mid ay caado ka dhigteen kulanka,fadhiisiga makhaayada iyo goobaha kale ee la iskugu yimaado saacado badan maalinkasta.
Nadaafad xumo baahansan iyo fayo-dhowrka oo aad uliita;
Dhamman goobaha dadwaynuhu ku kulmaan sida makhaayadaha iyo suuqyada laga dukaamaysto ayaa ah goobo nadaafadoodu aad u-liidato sidoo kale fayo-dowrka bulshada ayaa aad u-liita taas oo sahlaysa in xanuunkan uu si-fudud ufido.
Fulinta awaamirta xukuumada oo aan gaadhsiisnayn heerkii loobaahnaa
Inta badan amarada iyo go’aamada gudida xukuumada ee Covid-19 ayaa ah kuwa ku-eeg TV –yada iyo Idaacadaha kuwaas oo aan ka muuqan fulintoodu bulshada dhexdeeda. Taasi waxa ay keentay in xaaladu sidii hore ay tahay-dadkii ayaa sidii isku dhex-socda, wada-fadhiya iyaga oo aan muujinayn wax taxadira oo khuseeya caabuqan Karona.
Wacyi-galinta oo aad uhoosaysa
Inkasta oo bulshada Somaliland ay la socdaan waxyeelada cudurkan ee uu ku hayo wadamada caalamaka, haddana waxa jira dad badan oo aan fikir saxa aan ka haysan xanuunkan. Bulshada qaar ayaa aaminsan in uu Covid-19 yahay xanuun kaliya kudhacaya dadka gaalada ah halka qaar kalana ay ka aaminsan yihiin in uu yahay xanuun sidii duriga oo kale ah sidaa daraaded bulshadan iyo duriguna ay aad isku yaqaanaa.
Goobaha uu Covid-19 Si-fudud Ugu Faafikaro Gudaha Somaliland
Makhaayada Cuntada iyo Shaaha
Makhaayadaha cuntada iyo shaahu waa goobo ay inta badan bulshadu ku kulmaan halkaas oo ay mudo badan fadhiyaan iyaga oo isku dhow-dhow. Nadaafada goobahan ayaa ah mid aad u-liidata. Shaqaalaha goobahan ayaa inta badan ah kuwa fayo-dhowrkodu liito.
Sariimaduhu waa goobo ganacsi oo kamida meelaha ugu badan ee bulshada Somaliland ku-kulmaan. Kumanan dumara ayaa ka ganacsada goobahan si ay usoo saaraan quutal-daruuriga qoysaskooda.Dhankale, dhaqan ahaan bulshada Somaliland oo ah bulsho intooda badan subax walba ay qoysasku soo adeegtaan ayaa keentay in sariimadihii ay noqdaan kuwa buuqa maalin walba. Nadaafada goobahan waa mid aad u-liidata sidoo kalana ah cidhiidhi taas oo noqon karta meelaha uu xanuunkani si-fudud ugu faafi karo dhibaato wayna bulshada u-keeni karta.
Goobaha bacadlayaasha ayaa ah kuwa ugu saxmada badan wakhtiyada ciidaha. Hadda waxa ay bulshadu udiyaar garoobaysaa ciidal fidriga halkaas oo kumanan kun oo qof ka dukaamaysanayaan goobahan dharka. Cidhiidhiga iyo saxmada goobahan ayaa hadda keeni kara in goobahan noqdaan meesha ugu xun ee caabuqan karona ku faafo.
Gaadiidka Dadwaynaha iyo Kuwa Gobalada Ubaxa
Basaska ayaa ah gaadiidka ugu badan ay bulshadu isticmaasho gaar ahaan Hargiesa halkaas oo kumanan dad ahi ay ku kulmaan iyaga oo aan badan koodu xidhayn qalabkii ka hortaga cudurkan inkasta oo gudidu tirade dadka raacaya ay dhimeen.
Tagaasiga iyo Bajaajta
Tagaasida ayaa ah gaadiid inta badan ay isticmaalaan dadwaynaha ku nool magaalada Harigesa halka bajaajta aad looga isticmaalo magaaloyinka kale sida Borama, Burco, Lasanod, Cerigabo iyo Gabilay. Dad aad utiro badan ayaa isticmaala gaadiidkan taas oo iyana sahli doontaa in uu xanuunkani si fudud ugu faafo bulshada.
Gaadiidka Safarada (Gobalada)
Isku-socodka bulshada ayaa todobadii sano ee udanbeeyey aad usoo kordhay kadib markii la sameeyey shirkadaha socdaalka gobalada kuwaas oo keenay gawaadhi casriya sidoo kalana qiimihii nooliga aad hoos ugu dhigay. Maalin kasta kumanan dad ah ayaa iskaga goosha magaalooyinka iyo tuulooyinka Somaliland. Isku-socodkaasi waxa uu keenayaa in xanuunkii ugaadho dhamman magaaloyinka iyo tuuloyinka wadanka.
Goobaha Qaadka Lagu iibiyo
Inkasta oo la hakiyey qaadkii iman jiray Somaliland sidoo kalana dadka lagu arko in ay keenayaan la maxkamadeeyo, hadana wali dadkii qaadka cuni jiray way helaan waanay cunaan. Waxa soo gala jaad qarsoodi. Dad aad utiro badan yaa ku kulma goobaha lagu iibiyo qaadkan qarsoodiga ah kuwaas oo kabadan dadkii markii hore ku kulmi jiray goobaha lagu iibiyo qaadka.
Xafladaha Meherka iyo Arooska
Waxa wali sidii caadiga ahayd iska socda xafladaha meherka iyo aroosyada halkaas oo dad tiro badan ku-kulmaan. Tani waxa ay iyana ka qayb-qaadan doontaa faafista caabuqan Karona.
Xawaaladaha iyo Bangiyada
Xawaaladaha iyo bangiyadu waxay ka mid yihiin meelaha ay bulshadu ku kulanto iyaga oo dhigaya ama qaadanaya lacag. Inta badan bulshada oo aan aqoon nidaamka iyo samirkooda oo hooseeya ayaa keenaya in ay ku adkaato in ay saf galaan oo ay isa-sugaan taasi waxay keenaysaa in ay isku dhawaadaan.
Isbitaalada kuyaala magaaloyinka waawayn oo ah goobo lagu dabiibo bukaano tiro badan oo qaba xanuuno kala duwan ayaa ah kuwa khatar ugu jira cudurkan Covid-19. Dad aad tiro badan ayaa booqda dadka xanuunsanaya kuwaas oo si-fudud iskaga gala goobahan. Haddii dad cudurka Covid-19 ay galaan goobahan, waxa dhici karta in ay ugubiyaan xanuunkan shaqaalaha caafimaadka iyo bukaano badan kuwaas oo markii hore la tacaalayay xanuuno kale sida macaan, dhiig-kar, kalyo-xanuun iyo joonis taas oo sahlaysa in xaaladu sii xumaato kadibna ay keeno dhimasho badan.
Raysalayasha iyo Kofeerada
Goobaha timaha lagu jaro ayaa ah goobo bulsho badan iskugu yimaadaan halkaas oo hal qof uu wada xiirayo una maydhayo madaxa dad badan oo kala duwan kuwaas oo dhamantod ah rag iyo caruur. Dhinaca kale, kofeerada ayaa ah goobo ay iskugu yimaadan bulsho badan loogu qurxiyo dumarka. Waxa shaqaalaha iyo dadka goobahan yimaadaa ay noqon karaan kuwa si-fudud uqaada xanuunkan.
Goobaha Dhismaha Guryaha
Inta badan bulshada Somaliland waa qaar la tacaalaya helista nolol maalmeedka. Wastaadka, nijaarka iyo kuuliga ayaa ah shaqada ugu badan ee bulshadu qabato iyada oo dhisaya guryaha. Shaqaalahas tirada badan waxa ay noqon karaan qaar unugul caabuqan Karona.
Inkasta oo garoomada ciyaaraha ee la dhigo rooga cagaaran ay dowladu xidhay, haddana dhalinyaro aad utiro badan ayaa ku ciyaara garoomada yar-yar ee xaafadaha ku yaala halkaas oo tiro kale oo badana ay udaawasho yimaadan. Halkaas waxa ka dhalan kara in xanuunkii uu si fudud ugu fidho xaaladan.
Xabaalaha iyo Dadka Maydka Maydha
Maalin kasta dad aad utiro badan ayaa ka qayb-qaata aaska ka dhacaya xaalabaha kala duwan ee magaalinka Somaliland. Dadka tirada badan ayaa keeni kara in kala qaadaan xanuunkan hadii midkood xanuunka qabo. Dhanka kale waxa jira dad la yaqaano oo ku shaqaysta maydhista maydka kuwaas oo hadii ay maydhan qof xanuunkan udhintay laga yaabo in iyaga xanuunku usoo gudbo sidoo kalana dad kale ay qaadsiiyaan.
Goobaha lagu iibiyo xoolaha nool ayaa ah goobo dad aad utiro badan ay ku kulmaan. Dadkan ayaa ah laba qaybood-dad magaalooyinka dagan oo ushaqo taga ama xoolo iibsanaya iyo dad ka yimid baadiyaha oo xoolaha keenay. Dadkaas badan waxa ay keenaysaa in Sayladuhu noqdaan meel xanuunka Covid-19 uu si-fudud ugu faafo iyo sidoo kale meel xanuunku uga sii gudbo dad baadiyaha kunool.
Masaajidadu waa goobo cibaaado kuwaas oo ay waajib tahay xurmayntooda ayna mudan tahay in la joogo, la camiro laguna nagaado in badan si loo helo naxariista ilaahay. Masaajidku waxay kamid yihiin goobaha ugu badan ee dadku kulmaan. Xaalada xanuunkan Covid-19 ayaa samayn kuyeelan karta dadka badan ee jamaca ku tukanaya masaajidada taas oo ay mudan tahay in sheekhdu iyo masuuliintu si-wada jira uga fikiraan ilaalinta caafimaadka bulshada haddii kale uu xanuunku si-fudud ugu fidho karo dadka jamaca ku tukada masaajida gaar ahaan dadka inta badan jamaca masaajid ilaaliya oo u badan dad waawayn oo laga yaabo in ay xanuuno kale qabaan.
Waxa jira xaafado aad utiro badan oo ku yaala magaalooyinka waawayn ee Somaliland gaar ahaan magaalada Hargiesa. Xaafadaas waxa kunool dad danyar ah kuwaas oo tiradoodu aad ubadan tahay. Goobahan oo ay tusaale utahay xaafada State House ka ee magaalada Hargiesa ayaa ah meelo aad ugu nugul in uu xanuunkan si fudud ugu faafo. Haddii xanuunkani gaadho xaafadaas, waxa uu sababi karaa saamayn balaadhan taas oo in wax laga qabtaana ay adkaan doonto.
Magaaloyinka iyo Tuulooyinka Xududaha
Wadamada jaarka la ah Somaliland sida Jabouti, Ethiopia iyo Somaliya ayaa ah wadamada safka hore kaga jira wadamada uu haleeyey xanuunkan Covid-19 ee Bariga Africa. Xadka Somaliland la wadaagto wadamaas oo dheer ayaa sahlaya in dad badan ka soo gudbaan kuwaas oo laga yaabo in ay qabaan xanuunkan Covid-19 taas oo dhibaato hor leh uhorseedi karta bulshada Somaliland. Xiliga xagaaga dad aad utirobadan oo reer Jabuuti ah ayaa iman jiray Somaliland gaar ahaan Hargiesa iyo Borama kuwaas oo hada kutalo jira in ay yimaadaan wadan siday doonan ha ku soo galaanbe.
Saamaynta Dhaqaale ee Caabuqa Karona ee Bulshada Somaliland
Saamaynta dhaqaale ilaa hadda muuqata ee xanuunkan waxa ugu waawayn kuwan hoos ku xusan:
Shaqaale tiro badan oo shaqo belay
Xayiraadaha la saaray goobaha shaqada sida iskuulada iyo shirkadaha ayaa keentay in kumanan qof ay ku adkaato noloshii kuwaas oo ay maskaxdooda ka guuxayso “Gaajo iyo Karona keebaa daran”.
Lacagtii ay soo diri jireen qurba-joogta oo istaagtay
Lacagta ugu badan ee Somaliland kasoo gasha dhinaca dibada waxa soo diri jiray dadka qurba joogta ah lacagtaas oo hadda umuuqata mid gabi-ahaanba is-taagtay;
Lacagtii xoolaha nool oo iyana umuuqata mid meesha ka baxday
Joojinta xajka ee sanadkan waxa ay saamayn wayn ku yeelan doontaa iibkii xoolaha Somaliland taas oo keeni karta baahida taagan oo sii koradha.
Qaabka ugu haboon ee ka hortaga iyo xakamaynta Covid-19
Inkasta oo fariinta mobilada lagu duubay ay tahay mid marwalba xasuusinaysa bulshada qaababka looga gaashaanto xanuunkan, haddana waxa muuqtada in aanay jirin wax is-badal ah oo ay bulshadu samaysay. Waxa haboon in gudida xakamaynka xanuunkan ay xoojiyaan wacyi-galinta iyaga oo isticmaalaya qoraalo badan iyo muuqaalo koo-kooban oo ka hadlaya khatarta xanuunkan iyaga oo bulshada kula wadaaga baraha bulshada sidoo kalana ka sii daynaya dhamman TV-yada ka howl-gala Jamhuuriyada Somaliland
Howl-galinta Dhakhaatiir iyo Kal-kaaliyaal Caafimaad
Waxa haboon in si deg-dega loo howl-galiyo dhakhaatiirta iyo kal-kaaliyaasha caafimaad ee u-diwaan gashan Wasaarada Horumarinta Caafimaad kuwaas oo ka howl-galaya 16 goobood ee aynu kor ku xusanay iyada oo soo gudbinaya war-bixin maalin leh ah.
Iyada oo wax walba ay xadidayso awooda iyo qalabka ay dowladu hayso, haddana waxa baadhitaan ku samayn kartaa dadka ugu dhow ee xanuunkan qaadi kari sidoo kalana dad tiro badan usii gudbin kara sida:
Shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalada wawayn
Shaqaalaha makhaayadaha shaaha iyo cuntada
Shaqalaha dukaanada cuntada iyo dharka
Shaqaalaha raysalayaasha iyo kofeerada
Shaqaalaha xawaaladaha iyo bangiyada
Iyo dhamman dadka la kulmay dadka xanuunkan laga helay
Howl-galinta Ciidan Qaranka
Ilaa hadda waxa muuqata in bulshada badan keedu aanay u-hogaan samayn amarada ka soo baxa gudida ka hortaga iyo xakamaynta cudurka Covid-19. Haddii xaalku sidan kusii socdo waxa iman doonta xaalad cakiran. Waxa haboon in la howl-galiyo ciidan tiro badan kuwaas oo ka howl-galaya dhammaan goobaha looga baqo-qabo in caabuqan karona uu kufidi karo. Waxa ugu mudan 16 goobood ee aynu kor kuxusnay meelahaas oo ubaahan talaabooyin deg dega.
Ganaax iyo Maxkamadayn
In gacan bira lagu qabto cidii ka hortimaada go’aanada gudida sidoo kalana la siiyo digniin afa iyo mid qoraal ah intaas ka dib cidii umuuqata in ay u-hogaan sami waydo awaamirtaas in la maskamadeeyo sidoo kalana ganaax culus la saaro.
Saamaynta xanuunka Covid-19 ayaa noqon doontaa mid dunidu sanado badan ay kuqaadato in ay kasoo kabato sidoo kalana hadal-hayntiisu noqon doonto mid jiilal badan isku gudbiyaan. Haddii aan la samayn ka hortag fiican iyo qaabab dhaxal-gala oo lagula dagaalamo xanuunkan, waxa uu Covid-19 dhaxalsiin doonaa Somaliland mid wiiqa horumarka sidoo kale dhaxsiiya amni-daro, dhimasho iyo hoos udhac dhaqaale.
Haddii awaamirta ay soo saaraan gudida ka hortaga iyo xakamaynta xanuunka Covid-19 la raaciyo fulinteeda iyada oo bulshadana la ilaalinayo taasi waxay horseedi doontaa in uu yaraado saamaynta xanuunkani laakin haddii howshu usocoto sida ay hadda wax yihiin waxa xigi doona nolosha bulshada iyo amaankuba ay cidhiidhi galaan.
Ugu danbayn bulshada ayaa niyada ku haysa qaabka uu madaxwaynaha Somaliland iyo gudida Covid-19 u-maamulaan xaaladaha la xidhiidha cudurkan Covid-19 iyada oo bulshada Somaliland badan koodu ka dayrinayaan qaabka wax usocdaan. Haddii ay muujiyaan wax qabad kabadan kan hadda socda, waxa yaraan doona wal-walka iyo baqaha bulshada ee baryahan danbe isa soo taraya.
In gudida ka hortaga iyo xakamaynta xanuunka Covid-19 ay si xoogan ulafa-guraan go’aanda ay soo saarayaan.
Qaadkii waa la joojiyay laakin dadkii qaadkii waa ay cunayaan hadda. Tiro tii hore ka badan ayaa ku soo xoomaya meelaha qarsoodiyga ah ee qaadka lagu iibinayo taas oo kabadan tii markii hore.
Garoomadii cagaarnaa ee tobanka qof ku ciyaarayeen waa la xidhay laakin garoomadii ciida ahaa ayay boqolaal qof ku ciyaaraya iyada oo dad tiro badana ay daawanayaan.
Iskuuladii iyo jaamacadihii waa la xidhay laakin ardaydii makhaayadihii ayay iska fadhiistaan iyaga oo tiradodu intii fasalka kujiray ka badan tahay.
Iskuuladii dowlada waxa la yidhi online halagu dhigto laakin ardayda iskuulada dowlada dhigata inta badan ma haystaan mobilo, TV iyo Internet midnaba.
Gudidu waxa ay soo saartay go’aan ah nin guryaha lagu tukado laakin culimadii waa diideen go’aankaas.
In bukaannada laga baadho caabuqa Karona inta aan la jiifin isbitaalada kaladuwan ee wadanka gaar ahaan isbitaalka way nee magalaada Hargiesa oo hadda ah isbitaalka ay ka jirto caqsida ugu badan.
In dadku ku tukadaan guryahooda; masaajidadna loo ogolaado mu’adinka iyo shaqaalaha masaajidka si ay usii wadaan eedaanka, nadaafada masaajidka iyo wacyi-galinta bulshada.
In maadaama shaybaadkii shaqadii bilaabay, in baadhitaanka xanuunkan laga bilaabo gudida Covid-19 iyo golaha wasiirada oo uu uhoreeyo wasiirka caafimaadku si bulshadu ugu dhiirato baadhitanka oo ay u-aragto wax iska caadiya;
In gudidu ay uqaybiso deeqaha soo gaadhay iyada oo la wadaagaysa bulshada si aanu u-iman mad-madow iyo tuhun bulshaduna ugu kalsoonaato.
In shirkadaha is-gaadhsiintu gaar ahaan shirkada Telesom ay hoos udhigto qiimaha hadalka gudaha si dad badan ay u-awoodaan in ay sifiican uwada xidhiidhan taas oo yarayn kartaa isku-socodkii sidoo kale shirkada Somtel ay hoos udhigto adeega internetka.
In la diwaan-galiyo dadka ku dhinta magaaloyinka si loo ogaado tirada maalintii dhimata iyo xanuunada inta badan ay udhintaan. Waxa jira xanuuno badan oo lakala qaado kuwaas oo bulshadeena aad ugu faafay balse aanan xog dhaba laga hayn.
In caafimaadka bulshada laga hormariyo siyaasada iyo doorashooyinka.
War-bixinta Maalin laha ee Covid-19: WHO
Ururka Dhaqaalaha Aduunka (World Economic Forum)
Wasaarada Caafimaadka Somaliland
Qore: Abdirahman Deria Abdi
Bare-sare iyo Diyaariye PhD